Xirfadleyda Shiinaha ee Shiinaha waxay xirtaan dhar duug ah oo waara oo si fudud loo nadiifin karo warshadaha iyo soosaarayaasha | Ruisheng
Xirfadleyda muruqmaalaha dharka oo waara oo si fudud loo nadiifiyo
Waxaan leenahay labo saldhig oo wax soo saar xirfadle ah, koox naqshadeyn xirfadeed leh iyo nidaam iibka kaamil ah kadib. Dharka mowjadaha ragga ee aan soo saareyno waxay la jaan qaadi karaan xaaladaha kala duwan ee halista socodka, si wanaagsan u ilaalin jirkeena, u taageer iibsiga badan waxaanan ku siin doonaa qiimaha ugu fiican
Nambarka Model go'yaasha sariirta
Qurxinta Guri, Hoteel, Isbitaal
1.Wax weydiimaha iyo su'aalaha oo dhan waxaa looga jawaabi doonaa 24 saac gudahood.
Heerka labajibbaarka oo ay ku jirto heerka xirxiran ayaa ah midka ugu fiican uguna xasilloon.
3.Haree habeenkii si aad u kululeyso
4.Waxaan nahay warshad xirfadleyaal ah oo soo saarta dhar aan roobka lahayn oo neefsanaya
Huai'an RuiSheng Dharka Co., Ltd, waxaa la aasaasay 2010, waa xirfadle soo-dejin ganacsi shisheeye oo soo-saare iyo dhoofin dhoofineed oo ka socda Huai'an
Gobolka Jiangsu, Shiinaha. Bishii Juun 2018, shirkaddu waxay si guul leh u dhaaftay shahaadada caalamiga ah ee BSCI. Waxaan leenahay 2 warshadood oo kuyaala Huai'an, mid waxaa la dhahaa RuZhen oo ku takhasusay T-Shit, Polo, Pants, Shorts, Sportwear, Jacket, Coat, mid kalena waxaa lagu magacaabaa Haolv xirfadlayaal gogosha gogosha, gogosha, barkimada, furaashka, qurxinta.
Wada-hawlgalayaashayadu waxay daboolaan noocyada 400 ee 30 dal oo adduunka ah si ay ugu guuleystaan ​​kalsoonida dhammaan macaamiisha tayo sare leh, oo leh
ka heley macmiil joogto ah xagga sare tan iyo markii la aasaasay. Shirkadda waxay haysataa fikradda maamul ee ah “Tayada waxay Tahay Awooda, Tafaasiisha Gaarista Guusha”, waxayna isku dayeysaa inay wax wanaagsan ka qabato dhinac kasta, goob kasta oo ka mid ah habka wax soo saarka ilaa kormeerka ugu dambeeya, xirxiran iyo rarka.
Hore: Jaakadaha diiran Jaakadaha Fleece waxay taageeraan iibsiyada badan
Xiga: Shiinaha 100% rag cudbi ah oo dhar hurdo dhaadheer leh